လေဆိပ်မော်ကွန်း - ထို rayhab
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin, အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်xnumx'üncကိတ်ကွင်း၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးသွားရောက်ခဲ့ပြီးအာဏာပိုင်များ၏လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးအခကျြကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဘာသာရပ် (@ dhmihkesk ရဲ့) ခွဲဝေမှုအပေါ်တရားဝင်တွစ်တာအကောင့် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်, ရာသီဥတုနှင့်ထွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမြဲတမ်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေဘာသာရပ်အပေါ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ဆုံးဖြတ်ချက်။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဥပဒေနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားအဖြစ်အမြဲတမ်းလေကြောင်းနယ်စပ် Entry-ထွက်ပေါက်တံခါးကိုဖွင့်ဖို့အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
လေဆိပ်သတင်းအပေါ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်တစ်ခုရှင်းပြချက်များအတွက်အဆိုပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများတုံ့ပြန်မှုအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Turhan အစ္စတန်ဘူလ်ဝန်ကြီးဌာန။ ဤတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနများအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်စေကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်: "ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်တရားဝင်ပထမဆုံးနေ့ 76 ပေါ်တွင်အလုပ်စတင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ဝေမှုကိစ္စ၏စံချိန်တင်အရေအတွက်လေ့လာရေးခရီးတင်ဆောင်လာသောသံချေး Izmir-အစ္စတန်ဘူလ်တူရကီလေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကိုငှက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအများကြီးယူခဲ့သောဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထင်ရှား။ , ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး [ပို ... ]
တအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ် Taxiway ထံမှ precipitated ခဲ့သည်
စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားအပြည့်အဝသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစောပိုင်းဧပြီလအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်မှာ taxiway တစ်ခုမှာ။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဧပြီလအတွင်းလေယာဉ်ပျက်ကျလေဆိပ်မှာ taxiway တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကပိတ်သိမ်း 5-6 စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်သတင်းမှ Airporthaber Ataturk လေဆိပ်ရဲ့ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေး၏အဆိုအရ [ပို ... ]
အဆိုပါလေကြောင်းအတွက်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်တူရကီအတွက်လေဆိပ်များ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစေ့စပ် Kolin, Cengiz များ၏ပူးတွဲဆောက်လုပ်ရေး iGain နှင့် Galleon ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ၏လေချွန်ကျော်ပြန်သွားလေ၏။ လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အရောင်းအဝယ်များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်သို့ရောက်ကြ၏။ HDI Inc ကိုတစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်Havalimalarıစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူဆ 25 [ပို ... ]
Mersin Demand ကိုမှ intensive Air ကိုတက္ကစီပျံသန်း
အဆိုပါညွှန်ကြားချက်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းပုံမှန်အားစာရင်းစစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်ခြိုးခြံခြွေအစီအမံမျိုးရိုးကသမ္မတ Hemant နှင့်အတူနိုင်ငံသားများအတွက်အသုံးပြုရဟတ်ယာဉ်မှပိုင်ဆိုင် Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သုံးစွဲဖို့တင်ပြခဲ့ပါသည်။ Air ကိုတက္ကစီနှင့်ဇွန်လ 22 အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်အဖြစ်အမှုဆောင်စတင် [ပို ... ]
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ "အထွေထွေပြည်နယ်လေဆိပ်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်တရားဝင်ပြန်တမ်းရက်စွဲပါဇူလိုင်လ 25 ထုတ်ဝေ 2019 နှင့် 30842 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအမိန့် [ပို ... ]
BCCI ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Inc က ပို့ကုန်မြန်နှုန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာသုံးစွဲဘဝမှကယျတငျ
Yenisehir အဆိုပါ BCCI ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Muhsin Koçaslအလေးပေး, လေကုန်တင်အတွက်အရေးပါသော destination သို့လုပ်ရမည်ကုမ္ပဏီများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုယ်စားလှယ်များတင်ပို့Bursalıလက်၌လက်ပေးခြင်း, ကုမ္ပဏီ Akdeniz Air လေကြောင်းလိုင်းကုန်တင် Facility မှ ပို. အကျိုးခံစားရဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်။ [ပို ... ]
PPP ပါတီစီမံကိန်းများ၏အတိုင်းအတာအတွင်းပြည်နယ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအထှထှေညွှန်ကြားမှုလေဆိပ် / Terminal နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကို run လေဆိပ် / ဆိပ်ကမ်းယာဉ်ရပ်နားအခွန်ကြေညာခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် 2019 လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်တင်ဒါ။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေကြောင်းကုန်စည်နှင့်ခရီးသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏ပထမဦးဆုံး port ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း [ပို ... ]
2019 သန်းခရီးသည်တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယခင်ယခုနှစ်ပထမခြောက်လအတွင်း TAV လေဆိပ် 12 38,3 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ တူရကီလေယာဉ်ကွင်းလုပ်ငန်းများ, TAV လေဆိပ်ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အတွက် 345 ယူရိုသန်းအတွက်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်လေဆိပ်မှာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောတတိယလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်သောအခါအလေးအဆင့်ဆင့်၏ Total နှင့်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ လမ်းကြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်အတွက်တစ်နှစ် 20203လွတ်လပ်သောလေယာဉ်ပြေးလမ်း၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်ဖို့စီစဉ်ထားမှုနှင့်အတူ [ပို ... ]
အဆိုပါနိုက်တင်ဂေးလ်၏ကိုယျတျော၏ Macka အထူးခံရသူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Trabzon မှပျံသန်း
အဆိုပါနိုက်တင်ဂေးလ်ကိုဂုဏ်ပြုရန်စီစဉ်ကိုယျတျော၏လေယာဉ်တစ်စင်း Macka အာဇာနည် Trabzon မှပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ တူရကီလေကြောင်းလိုင်း (ကိုယျတျော၏), အစင်းများနှင့် mackali အာဇာနည်တွင်ထည့်သွင်းသစ်ကိုဘိုးအင်း 787-9 Dreamliner လေယာဉ်တစ်စင်းလို့ခေါ်တဲ့ Nightingale ရဲ့အခွန်ဆက်ရ '' Macka '' အစ္စတန်ဘူလ်ကနေ Trabzon မှပထမဦးဆုံးခရီးကိုဖန်ဆင်းသည်။ [ပို ... ]
တူရကီ, အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏တဦးတည်းနှင့်ကမ္ဘာအကောင်အထည်ဖော်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တတိယလေဆိပ်ဆက်လက်တည်နေရာအဘို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအမှတ်အဖြစ်အကြီးဆုံးလေဆိပ်တဦး။ နှောင်းပိုင်းတွင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကယင်းအစ္စတန်ဘူလ်-Antalya ငှက်ကိုသိုးစုသို့ဝင်ရောက်၏အချိန်နှင့်လေယာဉ်မှူးအခန်းဖန်ကွဲအက် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Sabiha Gokcen လေဆိပ်များ၏ဝေးဖန်ဆင်းခြင်း Be မှ
အစ္စတန်ဘူလ် Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ 2018 31 ရာခိုင်နှုန်းအလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနိုင်ငံတကာခရီးသည်ပြီးခဲ့သည့်လက 1 193 တထောင်သန်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ကြောင့်လေဆိပ်သစ်၏ဝေးလံမှ Sabiha Gokcen ခရီးသွားဧည့်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အဆိုပါလေဆိပ်သစ် Ataturk လေဆိပ် [ပို ... ]
သို့သော်လေယာဉ်နှောင်းပိုင်းတွင်မီတာ 30 အဆိုပါÇukurovaဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ်ကျော်လေဖြတ်ခဲ့
အဆိုပါÇukurovaဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ်မှဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း Mersin အတွက်မြွေဇာတ်လမ်းပြန်ဧပြီလလယ်, ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ပျံသန်းလေယာဉ်တင် 30 မီတာကိုကူးရာအရပ်တွင်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်။ Mersin လက်ထောက် Lutfi Elvan ရဲ့7လ AKP လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ [ပို ... ]
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, ဇွန်လအတွက်လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်လေယာဉ် 2019 နှစ်ပေါင်းယင်း၏ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးစာရင်းဇယားကြေညာခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ဇွန်လအတွင်း 2019 အဆိုအရ; လေဆိပ်, လေယာဉ်ကြောဆင်းသက်-takeoff အကြမ်းဖျင်းအတွက်ပြည်တွင်း 73.487 အတွက်စေ့စပ် [ပို ... ]
မီးသတ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: "တူရကီကမ္ဘာ့ဖလား Air ကိုပို့ဆောင်ရေးကို ဗဟိုပြု. ဖြစ်ကြလိမ့်မည် '
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ Mehmet Ates, အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောထုတ်ပြန်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တူရကီအတွက်လေကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားအဓိကခြေလှမ်းများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ၏ရူပါရုံ၌, ပြည်နယ်လေဆိပ်လုပ်ငန်းရဲ့ (SAE) [ပို ... ]
Tokat လေဆိပ်သစ်တစ်ခု 2020 အတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါက်တာ Ozan Balci, ရိုက်ပုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလေဆိပ်သစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်အထက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဆောက်လုပ်ရေးများ၏ထိန်းချုပ်မှုယူပါ။ Tokat သစ်ကိုလေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒေါက်တာ၏လုပျငနျးကျော် superstructure ဆန်းစစ် Tokat များ၏ရွာအနီးရှိစင်တာSöngütဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ချိတ်ဆက်ထားပြီး [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Antalya လေဆိပ်ပို Da ပိုလွယ်
အမှတ် 600 ဆက်ပြောသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လက်ရှိလေဆိပ် 800 နှင့် 400 ရေတွက်လိုင်းများအပြင် Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ လိုင်းများ၏လမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောခဲ့သည်။ ဤသုံးပါးကိုပင်, လေဆိပ်ကိုခရီးသည်ကိုသာအကြိုးရှိဆိုက်ရောက်ပြုသောအမှုမရနိုငျပေါ်ကိုနိုင်ဘူး။ [ပို ... ]
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 55 မိနစ်လျှော့ချမည်ဖြစ်ပြီးငါတို့မွို့မှကိုအလွန်ဆောက်လုပ်ရေးမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှုထောင့်ကိုအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သောတူရကီ-Yozgat လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးအကြားမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအလျင်အမြန်နေဆဲဖြစ်သည်။ Yozgat အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kadir Cakir, Yozgat နှင့် Sivas မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်းမန်နေဂျာ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ကနေ Antalya သင်၏ခရီးစဉ်, ငှက်သိုးစုများကနောက်ကျောများတွင်ထိမှန်ခဲ့သည်။ ဒါကိုတော့လေယာဉ်ရဲ့လေယာဉ်မှူးအခန်းဖန်အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသစ်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်, ကာကွယ်ရေးအပါအဝင်အဓိကအားမြောက်သစ်တောမြောက်မြားစွာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ, ငှက်ရွှေ့ပြောင်းဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ [ပို ... ]
Bursa '' တစ်ဦးက Tayyareci '' သမိုင်း; Vecihi Hürkuş
Bursa '' 58 ကိုနှစ်သက်၏လက်မှတ်အချိန်လေး assign ။ အဆိုပါပွဲတော်မှာဒီအချိန်, '' တစ်ဦး Tayyareci Vecihi Hürkuş '' ဆန္ဒပြခဲ့သည်။ '' 58 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Bursa ပွဲတော်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ Bursa ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဖောင်ဒေးရှင်းကိုယ်စား [ပို ... ]